MM Abiy Ahimad: riiformiin Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru falaasama 'ida'amuu' irratti kan hundaa'edha - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Waajira Ministira Muummee
Ministirri Muummee Abiy Ahimad haasawa Fooramii Diinagdee Addunyaa, Daavoos Swizarlaanditti taasisaniin, riiformiin Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru falaasama 'ida'amuu' irratti kan hundaa'e tahuu hirmaattootaaf ibsan.
Foramiin Diinagdee Addunyaa wagga waggaan Swiizarlaand magaalaa Daavoositti kan taa'amu yommuu tahu, dursitoonni biyyoota addunyaa 100 fi hooggantootni dhaabbilee idil-addunyaa 1000 ol irratti argamaniiru.
Ministirri Muummee Abiy erga aangootti dhufanii kaasee jechi irra deddeebiin itti fayyadaman Afaan Amaaraatiin jecha 'maddamar' jedhu yookaan ammoo 'ida'amuu' kan jedhudha.
Ministirri Muummee Abiy haasawa waltajjii kanarratti taasisaniin, waayee rifoormii Itoophiyaa keessatti gaggeessaa jiraniifi waayee falaasama isaanii ida'amuu addunyaatti himaniiru.
Kanas wayita ibsan, ''Rifoormiin ida'amuu uummata giddu-galeessa kan godhate yommuu ta'u utubaawwan sadii walirratti hirkatan qaba,'' jedhan.
Inni tokkoffaan dimookrasii cimaa dha. Lammaffaan miisooma dinagdeeti. Inni sadaffaan walitti hidhamiinsa biyyoota ollaa fi addunyaaf banaa ta'uudha,'' jedhaniiru.
Image copyright World Economic Forum
Yeroo ji'a sagalii aangootti dhufan keessattii gaazexeessitoota dabalatee hidhamtoota siyaasaa hunda manneen hidhaatii baasuu, namoota siyaasaa Itoophiyaa baqaan biyya alaa turan akka gara biyyyaatti deebi'an affeeruudha.
Kana malees, hayyama miidiyaalee dhuunfaa haaromsuu fi kaanis sirna dimookarsii ijaaruuf karaa banuu eegaluu isaaniif akka fakkeenyaatti kaasaniiru. Kutannoo sirna demookraasii ijaaruuf qabaniis ibsaniiru.
Afrikaa keessaa biyya guddina dinagdee saffisaa galmeessaa jirtu ta'uu addunyaa kan yaadachiisan Ministirri Muummee Abiy, dargaggoota harka 60 uummata biyyattii ta'ee fi dubartoota irrattii xiyyeefachuun giddina dinagdee saffisaa galmeessuu itti fufuuf karoora qaban tarreesaniiru.
Walitti dhufeenya naannoo fi addunyaa
Biyyoota ollaa waliin walitti hidhamiinsa jiru jabeessuufi ngaanyii fi misoomsi akka saffisuuf Itoophiyaan gahee guddaa taphachuutti akka jjirtus himaniiru.
Haasa'aa isaanii booda lammiilee Itoophiyaa keessattii walqoodinsi ture akkamiin furamee gaaffii jedhuuf gaaffii uummatootaa dhageeffachuun fala kennuutti hojjechuun isaanii miira tokkummaa fiduuf akka isaan gargaare himaniiru.
Hariiroon diinagdee Itiyoo-Ertiraa garamiittii qaxxaamura laata?
Araara Ertiraa waliin buusuuf gara Asmaraatti imaluu isaanii ilaalchisee yaaddoowwan hedduun turan akkamiin sana dandeessanii deemtan gaaffii jedhuufis imala gara Ertiraarra gara Daavoos imaluutu ulfaataadha jedhan.
Dhaabbileen gurguddoon daldalaa idila addunyaa Itoophiyaa keessatti hojiilee investimeentii garaagaraa irratti akka hirmaataniis waamicha dhiyeesaniiru.
Foramiin Diingadee Addunyaa (World Economic Forum) ganna 48'n dura, biyya Swizarlaanditti dhaabbata mit-mootummaa tahuun hundaa'e.
Viidiyoo Waa'ee MM Abiy haadholiin maal jedhu?